यदि तपाई चियाको सोखिन हुनुहुन्छ भने नछुटाई यो जानकारी पढ्नुहोस !! | सुदुरपश्चिम खबर
यदि तपाई चियाको सोखिन हुनुहुन्छ भने नछुटाई यो जानकारी पढ्नुहोस !!
चिया बनाउने सही तरिकाःएउटा भाँडोमा पानी लिनुहोस् । त्यसलाई उ’माल्नुहोस् । पानीलाई आधा मिनेटभन्दा बढी नउमाल्नुहोस् । त्यसपछि एउटा सुख्खा भाँडामा चियापत्ती हाल्नुहोस् र त्यसमाथि तातो पानी खन्याउनुहोस् । ५–६ मिनेटका लागि भाँडो छो’प्नुहोस् । त्यसपछि एउटा कपमा छानेर हाल्नुहोस् । अब स्वाद अनुसार दुध र चीनी हाल्नुहोस् । एक कप चिया बनाउनका लागि आधा चम्चा चियापत्ती ठिक्क हुन्छ ।
चियापत्ती, दुध र चीनीलाई सँगै हालेर उमाल्नु चिया बनाउने सही तरिका होइन । यसो गर्दा चियाको सबै फाइदा न‘ष्ट हुन्छ । यसरी चिया बनाउँदा चीया वा कफी स्ट्र’ङ्ग हुन्छ र यो थप क’डा हुन्छ । त्यसकारण यस्तो चिया पिउनुको कुनै फाइदा छैन ।
ता’त्तातो चिया पिउनु कति सही ?चिसो वा पानी पर्दा मानिसहरु तात्तातो चियाको माग गर्छन् । कहिलेकाँही ता’त्तातो चिया पिउँदा मुखसमेत पो’ल्छ जबकी चियालाई कपमा राखेको २–३ मिनेटपछि मात्र पिउनुपर्छ । (gnewsnepal.com बाट सभार)
हेर्नुहोस् आजको राशिफल ,यी तीन राशिलाई उत्तम दिन !!